Goatemalà : Ireo Kômandô Avy Ao Goatemalà Nalefa Ho Toy Ny Satroka Manga Any Kôngô · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Jona 2018 12:23 GMT
[Mitondra any amin'ny blaogy na vohikala amin'ny teny Espanola ny rohy rehetra ato amin'ity lahatsoratra ity, afa tsy izay misy fanamarihana manokana]
Kaibiles no iantsoana ireo Kômandô mahabe adihevitra avy amin'ny tafika avy ao Goatemala manaraka fiofanana manokana ao amin'ny tobim-piofanana iray Avaratry ny firenena, antsoina hoe “ilay helo”. Manakiana mafy ny fiofanana omena ireo Kaibiles ireo ny mponina ao Goatemala, fiofanana izay toa sahala amin'ny fampijalian-tena. Mampanontany tena ireo fomba ampiasaina ao araka ny anoritsoritan'i Statchka azy ao amin'ilay “La semaine noire d'un kaibil”(Herinandro mainty ho an'ny Kaibil iray). Ao no hamantarantsika fa anisan'ireo zavatra terena ho sotroin'izy ireo ny ràm-biby ho fitazonana aina.
Iray amin'ireo didy 10-n'izy ireo ny hoe : “Fitaovana natao hamonoana ny Kaibil ”. Taloha, maro tamin'ireo miaramila ireo no nandray anjara taminà famoretana ara-politika, ny sasany aza voampanga ho nanao heloka bevava sy fanararaotana. Amin'izao fotoana izao, ampiasaina anaty iraka hiadiana amin'ny vono olona matipaika izy ireo. Ampiasaina ho toy ny satroka manga ihany koa ny Kabiles ao amin'ny Repoblika Demokratikan'i Kôngô. 72 izao ireo Goatemala hita manodidina ny tanànan'i Gômà. Ity misy lahatsary ara-panjakana mikasika ny iraka ataon'izy ireo any Kôngô.
Raha jerena ny fampiofanana azy ireo, hitan'i Patrick avy ao amin'ny blaogy GNS Blog [amin'ny teny anglisy] fa mifanohitra amin'ny teny filamatr'izy ireo ny ny iraka fampandriana fahalemana tanterahan-dry zareo :
Na izany na tsy izany, ny teny filamatra mampalahelo malaza ratsin'ny Kaibil : “Raha mandroso aho, manaraha ahy, raha mijanona aho, atoseho. Raha miverin-dàlana aho, vonoy” tsy tena izay no andrandraina amin'ireo Satroka Manga.
Mpankafy ny Kabiles, ilay blaogera Perspectiva Militar, sady miaramila ihany koa, no nilaza amin'ny antsipirihany ny fampiofanana noraisin'izy ireo talohan'ny iraka nataony tany Kôngô, toy ny mialoha ireo iraka rehetra fanao any ivelany. Manamarika ny dingan'ny fampidirana ireo kabiles anatin'ny tafiky ny Firenena Mikambana izy ary nanoritsoritra ny fomba fanaovam-beloman'izy ireo amin'ny fianakaviany, ao amin'ny lahatsorany Les Kaibiles vont au Congo, en Afriques [amin'ny teny espaniola] (ho any Kôngô, any Afrika, ireo Kabiles). Ny taona 2006, 8 tamin'ireo miaramila ireo no namoy ny ainy nandritra ny iraka natao tany amin'io firenena io [amin'ny teny espaniola].
Maro ireo manontany tena ny amin'ny fomba nakàna ireo Kaibiles ho mpampandry tany, eo anatrehan'ny laza ratsin'izy ireo sy ny fandraisany anjara taminà karazana fanararaotana maro. Ao Kôngô RDC izay isian'ny toe-draharaha miharatsy hatrany, ahitàna ny fanolanana ho fitaovam-piadiana, napetraka ho eny amin'ny lohalaharana ny Kabile. Avy any amin'ny firenena iray niaritra ady an-trano toy izany izy ireo, ary mbola hoentin'ireo vehivavy ao Goatemalà mandraka ankehitriny ny voka-dratsin'izany. Ilay mpanao gazety Allan Nairn [amin'ny teny anglisy] anefa dia tena manana fanantenana ny amin'ny fitondrantenan'izy ireo mandritra ny iraka fitandroana filaminana atrehan'izy ireo ary matoky tao amin'ny blaoginy [amin'ny teny anglisy] fa hanova ny fitondrantenan'izy ireo io toejavatra vaovao io no sady tsy misy idiran'ny famonoana ara-politika mihitsy ny iraka ampanaovina azy ireo any :
Indray alina, maya iray sisampaty nandritra ilay ady an-trano no nilaza fa misy Kaibiles any Kôngô. Ireo Kômandô nofànin'i Etazonia ireo dia antsoina amin'ny fomba ofisialy hoe “ireo mpitondra hafatry ny fahafatesana” saingy nanampy izy fa tsy ela akory izao, valo tamin'ireo no tratry ny vela-pandrika ary maty tany amin'io firenena lavitra io.
Tsy takatry ny sain'ireo Kaibiles ireo angamba ny zava-nitranga tamin'izy ireo, lavitry ny trano fonenany. Tonga tao Kôngô amin'ny maha-miaramilan'ny Firenena Mikambana azy izy ireo. Toy izany ihany koa ny tantaran'ireo miaramila indoneziana izay nafindra ho Satroka Manga any Libanona ankehitriny. Any amin'ny misy azy, tsy misy lalàna hanara-maso ny iraka ataony, mamono olon-tsotra izy ireo, fa any an-kafa – izay hahatonga olana sasantsasany ny fanaovany izany – voarara ny fihetsika toy izany, ary amin'ny ankapobeny, na teo aza ny lasa, tsy mandany fotoany amin'ny famonoan'olona izy ireo (Olana hafa koa ny fanolanana: olana amin'ny ady rehetra io, ary mifangaroharo be ny iraka ataon'ireo tafika avy amin'ny Firenena Mikambana : ao Haïti, natao hiandraikitra ny famoretana koa izy ireo).
Tsy resaka olona izany, fa iraka. Tsy fitaovana natao hamonoana ireo mpamono olona ara-politika ireo. Voalohany aloha olombelona natao ho fitaovana famonoana izy ireo, ary raha nomanina ho eo amin'ny “Tsy hamono” no misy ilay fitaovana famonoana, fa tsy “Hamono”, ho zatra mankatoa izy ireo raha ny fiofanana noraisiny.
Ahoana no nahatongavantsika amin'ny fandefasana miaramila avy ao amin'ny tafika ara-dalàna avy ao Goatemalà ho any amin'ny Repoblika Demokratikan'i Kôngô? Manana fiandohana valim-panontaniana i Albedrío :
Alefa any amin'ireo faritra mampidi-doza indrindra ireo miaramila avy ao Goatemalà satria, araka ny loharano maro, heverina ho ampy traikefa sy ho mora vidy izy ireo, toy ireo namany avy any Salvador. Raha lazaina amin'ny teny hafa, i Goatemalà no mpanondrana mpikarama an'ady amin'ny adin'ireo firenena mpitrandraka harena voajanahary tsy te-hirisika be. Ny tombontsoa, eny, fa ny sanda ara-politika na ara- olombelona, tsia.
Photo en médaillon sur la page d'accueil de Riacale……………Sary tao amin'ny pejy fandraisan‘i Riacale